မေလအတွက်၎င်း၏ 70 နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ကျင်းပသည့်ဒဏ္ဍာရီချာ, လာမယ့်မွေးနေ့သည်အထိကြာရှည်မည်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အဆိုတော်အိမ်ခြံမြေနှင့်အတူအားလုံးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 305 သန်းဒေါ်လာပြည်နယ်သူမ၏မိသားစု get မည်, နိုင်ငံခြားစာနယ်ဇင်းရေးသားခဲ့သည်။
တစ်ခုအတွင်း, ချာ၏အဆိုအရ၎င်းတို့၏သားသမီးတို့အဘို့အိမ်မှာစောင့်ကြည့်သည့် realtors အတူသူမ၏အဆုံးနီးသည်ကိုခံစား - ယခင်ကမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ထို့နောက်မိမိအလိင်ပြောင်းလဲသွားသူကို Chaz Bono, ဧလိယအပြာရောင် Olmena ။
အဆိုပါပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်ကိုလည်းပြီးသားအငြိမ့်နထေိုငျလတံ့သောငွေသပ်ရပ်ပေါင်းလဒ်, မှတစ်ဆင့်သူမ၏ချပြီး, သူ့အစ်မများအတွက် Beverly Hills မှာတစ်အိမ်ကြီးဝယ်ယူခဲ့သည်။
ချာရဲ့မိခင် 89 နှစ်အရွယ်ဂျော်ဂျီယာ Holt, ယခုသူမ၏နှင့်အတူနေထိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရပါဘူးသူကို performance ။
Black Label: အဘယ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအော်စကာအားဖြင့်မရရှိသေးထားပြီး 14 သရုပ်ဆောင်တွေ,
2014 ခုနှစ်တွင်က "အော်စကာ", "ဂရမ်မီ" နှင့်တစ်ဦးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုနှင့်အတူမကျန်းမမာသည်အခြားမြင်သာထင်ဆုလာဘ်များဆုရှင်ပါ။ အချိန်မီကုသမှုနေသော်လည်းအဆိုပါရောဂါကူးစက်ချာနေဆဲခံစားနေရပြီးရာမှကျောက်ကပ်အတွက်လေးနက်သောပြဿနာများ, အားပေးတော်မူပြီ။ ဆရာဝန်အပေါငျးတို့သအကြံပြုချက်များများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနေသော်လည်းအနုပညာရှင်, ဖြစ်ကောင်းဒါလိုချင်သော, Kill ဖို့ကိုဝတ်ဆင်လျက်၏ခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တက်ကြွစွာခရီးစဉ်လှုပ်ရှားမှုသို့ပြန်လာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
ဒါဝိဒ်သည် Bowie ပရိတ်သတ်များကသူ၏ရုပ်တုကိုမှအခွန်ဆက်ဆပ်ဖို့ဘယ်လောက်ထွက်နေသေးတယ်
Selena Gomez ကပထမဦးစွာကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသမှု၏အသေးစိတ်အကြောင်းကိုပြောပြသည်
ဂျိမ်း McAvoy ကှာရှငျး
ယေရှဲဂျိမ်းစ် "အမျိုးသမီးများနေ့မတ်လ" ၏ Sandra Bullock နဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအကြောင်းကို Twitter ပေါ်တွင်အရှုပ်တော်ပုံပို့စ်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီနှင့်အတူချိုး-up, မဂ္ဂဇင်း၏မျက်နှာဖုံးပေါ်သည်ထင်ရှားပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Brad Pitt
ဂျနီဖာလောရင်နှင့် Darren Aronofsky ရုပ်ရှင် "Mama" ၏ Premiere မတိုင်မီရက်စွဲတစ်ခုပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြ
လီယိုနာဒို 2016 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်နိုင်သော "အော်စကာ" ဆုရရှိသူစာရင်းကိုထိပ်ဆုံးမှ
Julio Iglesias အခြားသားရှိပါတယ်
တစ်ကြော့လမ်းအတွက်ကိတ် Middleton, အောက်စ်ဖို့အတွက်ကျောင်းလည်ပတ်ခဲ့
ရွန်နီမာရ်နှင့် Joaquin ကိုဖီးနစ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပြီးနောက်အတူတကွပြောက်
ကြက်ခြေနီနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏နှစ်ပတ်လည်မှဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် II ၏အသစ်ပုံတူ
Lindsay Lohan မြွေကိုက်ခံခဲ့ရ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Jacket - နွေဦး 2015
ခရမ်းချဉ်သီးပေါ် aphids ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
Pleated စကတ် 2013
စီးရီးကနေ 25 အရူးဓာတ်ပုံများ "အရှက်ကိုလွှမ်းမိုးနှင့်ကိုအောင်နိုင်"!
Mattel ထူးချွန်မိန်းမတို့အားဆက်ကပ်အပ်နှံ, Barbie ရုပ်တစ်စီးရီးဖြန့်ချိ
ဟယ်လိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအားရစရာ - cookies "စုန်းမလက်ချောင်းများ"